म्यादी प्रहरी छनौट अन्तरगत सोमवार नुवाकोटमा पनि मौखिक परीक्षा लिईयो । | Radio Langtang 90.3 Mhz
२१ चैत, नुवाकोट । आगामी वैशाख ३१ गते घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नुवाकोटमा आवश्यक म्यादी प्रहरी छनौट अन्तरगत सोमवार मौखिक परीक्षा लिइएको छ । एकै दिन एक हजार जनाको मौखिक परीक्षा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।
म्यादीमा वेरोजगार युवा युवती तथा गृहिणी महिलाको आकर्षणसमेत रहेको छ । आवेदन दिएकाहरुलाई पहिलो चरणमा स्वास्थ्य परीक्षण र शारिरीक तन्दुरुस्ती, दोश्रो चरणमा लिखित तथा तेश्रो चरणमा मौखिक परीक्षा सोमवार लिइएको हो । पहिलो चरणमा लिइएको स्वास्थ्य परीक्षण र शारिरीक तन्दुरुस्तीमा एकहजार एकसय ८७ जना उत्तिर्ण, दोश्रो चरणमा लिइएको लिखित परीक्षामा एकहजार ४७ जना उत्तिर्ण भएकोमा उनीहरुलाई तेश्रो चरणमा मौखिक परीक्षामा सामेल गराइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी नायव उपरिक्षक ऋषिराम कणेलले जानकारी दिए ।
मैखिक परीक्षामा एक हजार जना सामेल भएकोमा मंगलवार उत्तिर्ण भएका र नुवाकोटलाई आवश्यक सात सय ७२ जनालाई ५५ दिनको म्यादी प्रहरीमा नियुक्त गरिने उनले वताए । आवेदन दिएका एक हजार चार सय ४२ जना मध्ये दुई सय ६० जना महिला मात्र रहेका छन् ।
रोजगारीको कुनै अवसर नपाएपछि साधारण लेखपढ गरेको मात्र योग्यता भए हुने म्यादी प्रहरीमा स्नातक अध्ययन गरेकालेसमेत आवेदन दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । सहरबजार तथा ग्रामीण भेगबाट म्यादी प्रहरीमा युवाहरु भर्ना हुन आएको कणेलले वताए ।
प्रहरीका अनुसार म्यादी प्रहरीको लागी फर्म भरेर १० रुपैयाँको टिकट टाँस्नुका साथै नागरिकताको फोटोकपी पेस गरेपछि १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष नकटेका व्यक्ति छनौटका लागि योग्य हुने छन् । यसअघिका निर्वाचनमा काम गरेका, सुरक्षा निकायमा काम गरेर फर्केका अनुभव झल्कने प्रमाणपत्र भए त्यस्ता व्यक्ति प्राथामिकतामा परेका छन् ।
५५ दिनको रोजगारी र पछि अवसरको सम्भावना भएर आफु म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन आएको विदुर नगरपालिका वडा नं. १ वान्द्रेकी मुना थपलियाले वताइन् । उनले सुरक्षा निकायमा प्रवेश गर्ने आफ्नो रहर म्यादी प्रहरीमा आएर पुरा गर्न लागेको वताइन् ।
तारकेश्वर गाउंपालिकाको वुधसिङका सुरेश ओस्तीले आफुले वेरोजगारी भएको कारण म्यादी प्रहरीमा तालिम लिएर सक्दो रुपमा निर्वाचनमा सुरक्षा प्रदान गर्ने वताए । विदुर नगरपालिका वडा नं. ५ की शारदा गजुरेलले पनि पढाई खर्च जुटाउन म्यादीमा भर्ना हुने रहरले आएको वताइन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका अनुसार भर्ना हुनका लागि १८ बर्ष देखि २५ बर्ष सम्मका युवाहरु बढि आएका छन् । प्रहरी तथा सैनिक क्षेत्रमा काम गरेर सेवानिवृत्त, गएको संविधानसभा निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमा भर्ती भएर काम गरेका समेत भर्ना हुन आएको पाइएको छ ।
धेरै जसो युवाहरुमा म्यादी प्रहरीमा काम गरे पछि बैदेशिक रोजगारीमा जान सहज हुने भन्दै भर्ना हुन आउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । म्यादी प्रहरीका लागि प्राप्त दरखास्तबाट छनौटका लागि विभिन्न परीक्षा लिइएको हो ।
अन्तिम नतिजा चैत २२ गते मंगलवार प्रकाशन गरिने नुवाकोट प्रहरीले जनाएको छ । म्यादी प्रहरीको सेवा अवधि ५५ दिनको हुने प्रहरीले जनाएको छ । म्यादि प्रहरीको लागी सेवा सुविधा नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवानले पाएसरहको तलब, भत्ता र तोकिएबमोजिम रासन लगायत अन्य सुविधा उपलब्ध हुने छ ।
म्यादी प्रहरीका लागि नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने, कुनै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुर नठहराएको, राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, शारीरिक तथा मानसिक रुपले तन्दुरुस्त रहेको हुनुपर्ने प्रावधान तोकेको छ । नुवाकोटमा गत २०७० सालको दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनमा चारसय ६०, २०६४ मा पांचसय ९० जना म्यादी प्रहरी प्रतिस्पर्धावाट छनौट गरिएको थियो ।
सूर्यगढी गाँउपालिका वडा नं. १ लच्याङ स्थित छापमा रहेको मंगलादेवी आधारभूत विद्यालयमा विदेशी सहयोगमा विद्यालय भवन पुर्ननिर्माण गरिएको छ । ...
आज नागपञ्चमी, घरका मूलढोकामा नागको चित्र टाँसी मनाइँदै
२३ साउन, काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष साउन शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नागपञ्चमी पर्व आज परम्पराअनुसार घरका मूलढोकामा नागको चित्र टाँसी ...
जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा नभएपनि सम्झौता गर्न पाउने
९ माघ, भक्तपुर । भूकम्पपीडितको लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश भए पनि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा नभएर अनुदान सम्झौतागर्न नपाएका पीडितले अब सम्झौता गर्न पाउने भएका छन् ...